Indlu epholileyo kwaye eqaqambileyo
Poschiavo, Grisons, Switzerland
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRomina
Igumbi elikhulu kunye nokulungiswa kwindlu yentsapho ezimbini kwiindonga ze-Poschiavino stream, imizuzu emi-5 ngemoto ukusuka kwisikhululo se-BERNINA TRAIN. Indawo ezolileyo kunye nendawo enelanga. Ihlala ngokukhululekileyo abantu aba-5, ebandakanya ikhitshi, igumbi lokuhlala elikhulu, amagumbi okulala ama-3 kunye negumbi lokuhlambela elikhulu. Indlu exhotyiselwe ABAHAXKILEYO. Indawo entle yokuqalisa kuzo zombini iihambo zasehlotyeni nasebusika. Ukutyibilika kwekhephu kunye nekhephu kwimizuzu engama-20 kude (Bernina)
Indlu 75 m2 kwaye siquka:. Ekhitshini baxhotyisiwe esitovini, eziko, njengesicocisi, umatshini ikofu, ngetoaster, ifriji enkulu (kunye efrijini) kunye okudlela yembombo, igumbi (ecaleni ekhitshini) flat screen TV eziphilayo flat screen ,Isofa yabantu abathathu kunye nezitulo zokulala Kukho amagumbi okulala amathathu: elinye linebhedi elala abantu ababini, elinye linebhedi ezimbini zesingle kunye nelokugqibela linebhedi enye nedesika. Ekugqibeleni, igumbi lokuhlambela ligcwele ishawa kunye nebhafu.
Umnyango wendlu wenziwa yindawo eqhelekileyo kunye namanye amagumbi apho ungasebenzisa umatshini wokuhlamba kunye ne-cellar yangasese enokuthi isetyenziswe njengendawo yokugcina i-skis, iibhutsi, iibhayisekile, iistrollers ....
Indawo yokupaka yabucala yasimahla.
Igadi yabucala enefenitshala yegadi.
Jonga kumzila kaloliwe wase-Rhaetian, isikhululo sikaloliwe sase-BERNINA esikufutshane (i-Poschiavo) sikwimizuzu emi-5 kuphela! (Kukwakhona ukufikelela kwisikhululo ngebhasi yeposi). Imizuzu engama-20 ukusuka eTirano (eItali), imizuzu engama-30 ukusuka e-Engadina (i-Pontresina St Moritz) kwaye ehlotyeni, ngenxa yokudlula kwe-Forcola, kunokwenzeka ukuba ufikelele e-Livigno (indawo ye-custom duty) kwimizuzu engama-30.
4.87 out of 5 stars from 69 reviews
4.87 · Izimvo eziyi-69
Indawo egqwesileyo yohambo lokuhamba ehlotyeni nasebusika (ukhenketho lwebhayisekile yentaba, ukukhwela intaba, ukutyibilika ekhephini ...)
Ungaphoswa luhambo olumnandi e-VAL DI CAMPO indawo yendalo ekhuselweyo, enamachibi amahle.
Ukutyibilika kwithambeka lemizuzu engama-20 kude
Umbuki zindwendwe ngu- Romina
Ndishiya iindwendwe ukusondelana kwazo kodwa zihlala zikhona.
Iilwimi: English, Italiano
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$108
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Poschiavo